‘जानी – जानी छातीको ट्याटू देखाएकी होइन’ – Mero Film
‘जानी – जानी छातीको ट्याटू देखाएकी होइन’
२०७४ चैत १५ गते १५:२५
अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह ‘डिम्स’ बाट नेपाली फिल्ममा प्रवेश गरेकी हुन् । डेब्यू फिल्मबाट पर्याप्त चर्चा बटुलेकी उनी अहिलेकी चल्तीकी कलाकार हुन् । बेलाबखत विवादमा तानिइने उनीसँग एक अन्तरबार्ता :
व्यस्त देखिनुहुन्छ ।समय व्यवस्थापन गर्न कत्तिको गाह्रो छ ?
अहिले गाह्रो नै भइरहेको छ । फिल्म कायराको सुटिङ बाकी नै छ । नयाँ फिल्म तिमीसँगको प्रिमियरको भोलिपल्ट लन्डन जाँदैछु । इन्टु मिन्टु फिल्मको काम पनि केही भ्याएकी छैन ।
‘तिमीसँग’ को प्रमोसन कस्तो भइरहेको छ ?
मेरो डेब्यू फिल्म ड्रिम्सको प्रमोसन भुवन जीले मलाई कतै पनि लानुभएन । दोस्रो फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’ मा निर्माताले भनेको ठाउँमा मात्रै प्रमोेसनका लागि गएकी थिएँ । तर, ‘तिमीसँग’ को प्रमोसनमा भने पहिलो पटक डेडिकेटेड भएर लागेकी छु ।
‘तिमीसँग’कस्तो फिल्म हो ?
त्रिकोणात्मक प्रेमकथा भएको फिल्म हो । यसमा म नीतिको भूमिकामा छु । नीति नेपाली भए पनि बाहिर हुर्केकी केटी हो । पहिलो पटक उ नेपाल घुम्न आउँदाको अनुभव यसमा छ ।
यो फिल्मबाट यसअघि तपाईले पाएको सफलता जोगाउन मुश्किल पर्नसक्छ भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ नि ?
फिल्म चाहिँ राम्रै बनेको छ । मैले यसमा आफ्नो बेस्ट दिएकी छु । तर,दर्शक नै सबथोक हो । उहाँहरुले नै वाँस्तविकता छुट्याइहाल्नुहुन्छ ।
एक दुइटा फिल्म गर्दै चर्चामा आउने कलाकार नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा निकै कम छन् । तर, तपाई पहिलो फिल्मबाटै चिनिनुभयो ।यो कसरी ?
त्यो चाहिँ दर्शकलाई सोध्नुपर्छ ।मैले आफूले गर्नुपर्ने मेहनत गरेकी हुँ । उहाँहरुलाई मेरो आवाज नयाँ लागेर पनि होला । मलाई पहिलो फिल्म मै रुचाइदिनुभयो । यो आवाजकै करणले गर्दा हो कि?
सबै लभ स्टोरी भएका फिल्ममा मात्रै काम गर्नुभयो । अब अलि फरक फिल्म वा चरित्रमा अभिनय गर्ने सोच छैन ?
लभ स्टोरी कहिले पनि अफ द टपिक हुदैन ।म आफैँलाई पनि रोमान्टिक फिल्म मन पर्छ । लभ स्टोरी भए पनि प्रत्येकमा भिन्न कयारेक्टरमा अभिनय गरेकी छु । म पनि नयाँ स्क्रिप्ट चाहन्छु तर सबै लभ स्टोरी आइरहेको छ ।
तर, दर्शक साम्राज्ञी भिन्न भूमिकामा आएको हेर्न चाहँदैनन् र ?
कतिपय फिल्ममा मैले फरक रोल निर्वाह गर्न चाहे पनि त्यस्तो स्क्रिप्ट आउँदैन । म राम्रो स्क्रिप्ट कुरिरहेकी छु । त्यस्तो आयो भने निसन्देह गर्छु ।
‘ए मेरो हजुर २’मा तपाईले पाँच लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिँदा महँगो भयो भन्ने चर्चा गरियो । त्यो साँच्चिकै महँगो हो त ?
यसलाई म महँगो भन्दिन । हरेक कुरा महँगो भइरहेको छ । तर, जति मेहनत गरे पनि महँगीअनुसार पारिश्रमिक बढिरहेको छैन । दुख गरेअनुसार नै मैले पारिश्रमिक बढाउँदै गइरहेकी छु । एउटा फिल्मको सुटिङ नै पाँच छ महिना हुन्छ । त्यसपछि प्रमोसनमा पनि हिँड्नुपर्छ । त्यसैले यत्तिको पारिश्रमिक हामी डिर्जभ गर्छाै । फिल्म निर्माताले त्यति धेरै नाफा कमाउँछन् । तर, हामीले त एक पटक मात्रै लिने हो । त्यसैले हामीले पाउनुपर्ने कुरा पाउनुपर्छ ।
तपाईको को- एक्टर नाजिर हुसेनसँग बोलचाल बन्द भएको चर्चा चलेको थियो । गसिप मात्रै हो कि सत्य हो ?
त्यस्तो बोलचाल नै बन्द भएको छैन । जति कलाकारसँग मैले काम गरेँ , उहाँहरु सबैसँग म राम्ररी बोल्छु । नाजिर र म सुटिङ या फङ्सनहरुमा भेट भएका बेला बोलिरहेका हुन्छौँ । त्यो बाहेक हाम्रो निजी जीवन पनि हुन्छ । बरु नाजिर र म धेरै मिल्ने भएकाले सुटिङमा एक पटक ठाकठुक परेको थियो । हामी एक हप्तापछि बोल्न थालेका थियौँ । त्यसैैलाई बढाइचढाइ गरेर चर्चा गरिएको होला ।
तपाई अरु बला चुपचाप बस्नुहुन्छ ,फिल्म रिलिज हुने बेलामा मात्रै मिडियामा आउनुहुन्छ । खास कुरो के हो ?
हो, त्यो म गर्छु । फिल्म साइन गरेपछि त्यसलाई समय दिनुपर्छ ।त्यतिबेला उहाँहरुले बोलाएको बेला म जतिबेला पनि आइपुग्छु । तर, त्यो बाहेक मेरो पनि त आफ्नो निजी जिन्दगी हुन्छ । मैले पढ्नुपर्छ । जहिले पनि मिडियामा उपलब्ध भइराख्न सजिलो पनि छैन । आफ्नो फिल्मको प्रमोसन गर्ने बेला उपलब्ध भइदिन्छु । अरु बेला मलाई मिडियामा आउन त्यति ठीक पनि लाग्दैन ।
बेला बेलामा तपाइको प्रेम सम्बन्धबारे चर्चा भइरहन्छ । अहिले प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ ?
म त्यो भन्न चाहन्नँ । भन्न जरुरी पनि लाग्दैन । हामीले आफ्नो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवन छुट्याउनुपर्छ । कहिल्यै पनि निजी जिन्दगीलाई व्यावसायिक जिन्दगीमा मिसानु हुदैन भन्ने मलाई लाग्छ । तर, यहाँ यस्ता चर्चा भइरहन्छन् । यसले मलाई केही फरक पर्दैन । अहिले म पढाइ र करिअरमा मात्रै फोकस्ड हुन चाहन्छु ।
केही समयअघि छातीमा ट्याटू खोपेके तस्बिर सार्वजनिक भएपछि तपाईको निकै आलोचना भयो । यस्ता कुराले करिअर बिग्रन सक्छ भन्ने कुरामा कत्तिको सचेत हुनुहुन्छ ?
एकदमै सचेत छु । नचाहेको कुरा बाहिर आउँदा मलाई मात्रै होइन ,दर्शकलाई पनि नराम्रो लाग्न सक्छ । यस्ता कुराले असर पर्छ पनि । त्यो जानी जानी सार्वजनिक भएको होइन, असावधानीवश भएको हो । तर, म मेहनत गरिराख्छु अघि बढिराख्छु । म आफ्नो मेहनतले नै सबैको मुख बन्द गराउन चाहन्छु । म लुकेर चाहिँ बस्दिन ।
पहिलो पटक क्यामरा फेस गर्दा कस्तो लाग्यो ?
क्यामराअघि बोल्दा चाहि डर लागेका थियो । सुटिङ गर्दा फिल्मको पार्ट पार्ट गरी गरिन्छ । त्यो सिरियल वाइज हुदैन । तर, मैले पहिलो पटक सुटिङ गर्दा सुरुमै कलाइमेक्स सिन गरेकी थिए । फिल्म चल्दा त सुरुमै यस्तो आउँदैन ? यो कसरी भयो ? भन्ने लागेको थियो । के भएको हो भन्ने कुरामा अलमलिएको थिएँ ।
कतिपय कलाकारलााई आमाबाबुका कारण चलेको भन्ने टिप्पणी गरिन्छ । तपाइका हकमा वास्तविकता के हो ?
मेरो हकमा यो लागू हुन्न । मेरो मामु पनि कलाकार होइन । पापाले एउटा मात्रै विज्ञापनमा मोडलिङ गर्नु भएमो थियो । त्यसपछि फिल्म खेल्न धेरै अफर आएका थिए तर उहाँले कुनै पनि खेल्नुभएन । हाम्रो ठकुरी परिवारमा छोरीले राम्रोसँग नपढे राम्रो केटा खोजेर बिहे गरिदिने चलन हुन्छ । सबैको चाहना डाक्टर ,पाइलट बनाउने हुन्छ । मेरो पापा पनि यस्तै चाहनुहुन्थ्यो । म फिल्ममा आउँदा मेरो परिवारलाई मन परेको थिएन । राम्रो घरको छोरीचेली किन फिल्म क्षेत्रमा लाग्नुपर्यो ? भन्ने उहाँहरुको सोचाइ थियो । तर मामुले छोरीको इच्छा फिल्म क्षेत्रमै काम गर्ने छ, उसलाई काम गर्न दिउ भन्नुभयो । त्यसपछि म फिल्म क्षेत्रमा आउन पाएँ ।
नेपाली फिल्ममा के के परिवर्तन देख्नुभएको छ ?
पहिले कम खर्च गरेर फिल्म बनाउने तर मुनाफा धेरै लिन खोजिन्थ्यो । तर, अहिले केही परिवर्तन आए जस्तो लाग्छ । धेरै खर्च गरेर राम्रो फिल्म बनाउनुपर्छ भन्ने सोच अहिले आएको छ । त्यस्तै, मेकिङमा पनि परिवर्तन आएको छ ।
तपाईलाई मन पर्ने कलाकार को को हुन् ?
नम्रता श्रेष्ठ ,आर्यन सिग्देल ,कर्मा शाक्य , सौगात मल्ल मन पर्छन् ।
आउँदो पाँच वर्षमा साम्राज्ञीको कस्तो स्ट्याटस हुनेछ ?
त्यो चाहिँ मैले सोचेकी छैन । म अझै राम्रो क्यारेक्टर गर्न पाउँ । दर्शकलाई साम्राज्ञीले राम्रो काम गरिरहेकी छे भन्ने स्ट्याटस बनाउन चाहन्छु ।
साभार: सम्पूर्ण साप्ताहिक
सामाजिक सञ्जालमा नजोडिएका बलिउड सेलिब्रेटी
दादा साहेब फाल्के अवार्ड मनीषालाई
अल्पायु मै संसार छोड्ने अभिनेत्रीहरू
आयोजकको नियत नै खराब
सत्तालाई आतंकित पार्दै कवि विनोदविक्रम